Supervisor (စက်လိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး) Archives - Glory Assumption Space
1. Supervisor (စက်လိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး) – Female (8) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိုနှိုင်း) /လှိုင်သာယာမြို့နယ်(ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်)
1. Supervisor (စက်လိုင်းကြီးကြပ်ရေးမှူး) – Female (8) Posts / လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိုနှိုင်း) /လှိုင်သာယာမြို့နယ်(ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်) ။ (ကုမ္ပဏီမှ တိုက်ရိုက်အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။) • စက်ထည်တခုလုံး ချုပ်နိုင်ပြီး စက်သမားများကို ကြီးကြပ် ကွက်ကဲနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • အထည်ချုပ်စက်ရုံပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူ ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ • စက်လိုင်းတလိုင်းတွင် လူ (၆၀) ခန့်ရှိပါသည်။ • တက္ကသိုလ်တခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးထားသူ ဖြစ်ရမည်။ • တနလာင်္နေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ အလုပ်ချိန် (မနက် ၇း၃၀ မှ ညနေ ၆း၃၀ နာရီ ခွဲ အထိ) တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေ အလုပ်ချိန် (မနက် ၇း၃၀ မှ ညနေ ၃း၃၀ အထိ) တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ • တနင်္ဂနွေနေ့ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များ ပိတ်ပါသည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ပေါ်မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းနိုင်ပါသည်။ • လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ • လှိုင်သာယာ အနီးတ၀ိုက်နေထိုင်သူ ဦးစားပေးမည်။ • Garment Factory ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Garment Factory ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။